Egwuregwu egwuregwu kacha mma kacha mma nke 7 maka gam akporo | Gam akporosis
Storelọ Ahịa Play bụ ụlọ ahịa gam akporo kachasị amasị na ederede nke ngwa, ngwa ọrụ na, n'ezie, egwuregwu nke ụdị dị iche iche, ebe ọ bụ na oge a anyị bịara ikwu maka egwuregwu, anyị ga-ekwu maka ndị indies, nke bụ otu n'ime edemede. ọtụtụ ndị ọrụ rịọrọ ma chọọ, ebe ọ bụ na ọ bụ aha aha ya bụ, n'ọtụtụ dị ukwuu, dị ọhụrụ na / ma ọ bụ enweghị ọtụtụ nbudata, mana nke ahụ apụtaghị na ọ nweghị ezigbo ọla egwuregwu nke bara uru nbudata na ule.
Otu ihe dị mma banyere egwuregwu indie bụ na ha na-adịkarị ọhụụ, nke a bụ n'ihi na ndị mmepe ha na-anwa, ọbụlagodi karịa ndị mmepe buru ibu sitere na ụlọ ọrụ nwere obere akpa ego iji mepụta ha, iji mepụta ihe ọhụrụ na ihe ndị a, ọ bụ ya mere ha na-achọkarị ịbụ ndị nkịtị n'ọtụtụ ọnọdụ, iji mee ka ha nwee nnukwu ihe ịga nke ọma ma mee ohere n'etiti asọmpi siri ike nke egwuregwu dị na Storelọ Ahịa Play, nke jupụtara na puku kwuru puku na puku isi, nke ọ bụla dị mma karịa nke ọzọ. Na inye ụfọdụ otuto, oge a anyị na-anakọta egwuregwu kacha mma indie maka gam akporo.
Egwuregwu egwuregwu Indie nwere ike jupụta na egwuregwu nke ụdị dị iche iche, nke sitere na nke kachasị ọhụrụ ma mepụtara site na ndị mmepe na-enweghị nnukwu mmefu ego na / ma ọ bụ obere ụlọ ọrụ na ndị nwere obere nbudata ma bụrụ ndị a ma ama, ọ bụ ezie enwere ọtụtụ aha ndị jisiri ike nwee ihe ịga nke ọma, yabụ na ha nwere ewu ewu nke sitere na mbara igwe, ị ga-ahụkwa ọtụtụ n'ime oge a. N'okpuru ebe a, ị ga-ahụ egwuregwu 5 kachasị mma maka gam akporo.
Tupu anyị agaa, ọ bara uru ịkọwapụta ihe ndị a na-emebu: otu ma ọ bụ karịa n'ime ndị anyị depụtara na post a nwere ike ịnwe sistemụ nkwụnye ụgwọ ime, iji nweta ọrụ ndị dị elu yana nke dị elu, yana onyinye na ụgwọ ọrụ. Ma, ha niile nwere onwe ha, ọ dịghịkwa mkpa iwepụ ego ọ bụla.
1 Cookies Ga-anwụ
2 Lọ nke aghụghọ
3 Oke Oke Ohia
6 Nkọcha nke candies
7 Agba Agba - Mgbaghoju anya puzzle na ntụpọ na shapes
Kuki ga-anwu bu otu n’ime egwuregwu indie na-adọrọ mmasị ma na-atọ ụtọ maka gam akporo, n’enweghị obi abụọ ọ bụla, yana eserese eserese na eserese na-ahapụ ihe ọ bụla ịchọrọ. Nchegbu, anyị na-ekwu okwu banyere onye mmeri nke Ememme Egwuregwu Google Indie nke afọ gara aga, nke na-ekwu okwu nke ọma banyere otu esi arụ ọrụ aha a.
Lee anyị nwere Jack, onye ọrụ nzuzo zoro ezo nke nwere ike pụrụ iche wuru n'ime ahụ ya nke ndị sayensị gọọmentị mere. Obodo dị n'ihe ize ndụ, ọ bụkwa n'ihi kuki ọjọọ nke na-ezube ịwakpo ya nyere iwu nke ndị isi, nke ị ga - emerikwa. Zọpụta ụwa ma bụrụ onye mmeri nke agha apocalyptic akụkọ ifo.
Enwere ọtụtụ ihe odide ndị na-ezube imeri gị, ha niile dị ụtọ, mana ọ bụghị n'ihi nke ahụ na-enweghị enyemaka na enyi, mana ọ bụ nke ahụ. Ọ bụ egwuregwu ikpo okwu nke nwere ọtụtụ ihe, ngwa ọgụ nke ụdị ọ bụla nwere ike ịbawanye mma na ike na-enweghị atụ.
Developer: Belgha Ejima
Lọ nke aghụghọ
Ọ dị mma itinye uche n'ọrụ n'oge; N'ụzọ dị otú a, anyị na-arụsi ọrụ ike na, ebe ọ bụ na ọ dị mkpa iji nọgide na-enwe ezigbo ahụ ike, ọ dịkwa mkpa iji nọgide na-enwe ahụike ọgụgụ isi, na ụzọ dị mma karịa karịa egwuregwu egwuregwu mgbagwoju anya dị ka Tricky Castle?
Nwalee ọgụgụ isi gị ma dozie ilu, ihe omimi na mgbagwoju anya na, mgbe ha na-adịkarị mfe na mmalite, ha na-amalite inwe mgbagwoju anya ka ị na-enwe ọganihu site na egwuregwu ahụ. Izere na nnukwu ụlọ ma weghachite ada eze; Were ya na Obodo Ọjọọ Dị Njọ, na-ezere ọnyà na ihe mgbochi niile dị n'ihu.
Tricky Castle Games Egwuregwu Logic
Developer: EGWU OZIZU CASUAL AZUR
Aha egwuregwu a na-asọpụrụ nnukwu anụ mmiri a na-akpọ Oceanhorn, nke bụ ụjọ nke ụwa egwuregwu n'onwe ya. E nwekwara ọtụtụ agwaetiti ndị a na-akọwaghị na mmiri na-amaghị nwoke, nke ị ga-aga njem iji chọpụta ma banye n'ime ihe omimi, dị egwu na, karịa ihe niile, ebe ndị a na-atụghị anya ha na ihe ndị e kere eke na-ahụtụbeghị mbụ.
Ihe eserese 3D na eserese na-atọ ụtọ, na oke ala nke na-emikpu gị na akụkọ ifo nke Oceanhorn na-eche. Ga-abụrịrị obi ike gabiga ma merie njem ahụ. Must ga-chọọ na-ahụ ọtụtụ zoro ezo akpọkwa ga-enyere gị na usoro.
Egwuregwu ahụ bụ n'efu ka ibudata ma wụnye, mana ị kpọghee ọhụụ ya niile ị ga-azụrịrị ime. Na nke a, ị nwere ike igwu Oceanhorn ruo ọtụtụ awa.
Ọ bụrụ na ị bụ otu n’ime ụlọ akwụkwọ ochie ndị nwere PC nwere Windows ochie, enwere ike ị kpọtụrụ Pinball na ọdịdị ya kachasị mma. Ọ bụrụ otu a, n'ezie ị bụ otu n'ime ndị egwuregwu ahụ nwere ọfụma na mbido afọ 2000, karịa ihe ọ bụla. Mgbe ahụ Will ga-ahụ PinOut n'anya, n'ihi na ọ bụ egwuregwu pinball nke nwere isiokwu ọhụụ na nke ga-eme n'ọdịnihu, na ezi ihe omuma nke oma na ihe omimi di egwu nke na, otua esi adi na ozo, nke a na-akwado site na egwu di egwu nke akwukwo a na-etu.
Ọ bụ ihe egwuregwu arcade na nke ị na-esi ọtụtụ ihe isi ike merie etoju, dị ka oge ikpe mode. Ọkụ na ụda ahụ riri gị na PinOut ma ghara ikwe ka ike gwụ gị, mana, n'ezie, ị ga-elebara anya na bọọlụ ahụ, n'ihi na ịchọghị ida.
PinOut bụ egwuregwu zuru oke na, na mgbakwunye, enweghị ụdị mgbasa ozi ọ bụla, ihe enwere ekele maka ya, ebe mgbasa ozi na-emebi ahụmịhe egwuregwu,
Ọ bụrụ na ị bụ onye ofufe nke ọchịchịrị na apocalyptic ndapụta, egwuregwu egwuregwu a nwere ike ime ka ị maa mma. Nke a bụ na Oge a na-enweghị nkịtị bụ aha na-eme ka anyị laghachi na 70s dị anya, yana nke gbara ọchịchịrị na nke gbara ọchịchịrị nke agbụrụ mmadụ kpamkpam, ihe na, na-eche maka ya, anyị abanyeworị ụwa dị egwu, dị njọ na ọchịchịrị.
Dabere na ike nke kpochapụwo "isi wee pịa" egwuregwu, egwuregwu a, nke na-ekerịta ọtụtụ myirịta na ndị ọzọ ụdị ya, awade a dịtụ mfe ụzọ na-egwu, ma na-enwe ọganihu n'ime ya, ọ na-aghọwanye ihe mgbagwoju anya, nke na-eme ka ọ bụrụ ihe na-adọrọ mmasị ịkụ nzọ na-anakwere n'ụzọ nnabata.
Onye isi agwa ma ọ bụ onye protagonist bụ nwoke nke dị n'etiti, onye na-arụ ọrụ na onye nkịtị na-amanye ịbanye n'ime ihe ọjọọ nke egwuregwu ahụ. Control na-achịkwa ya; -eme ka ọ na-adị ndụ na-ọkachamara na-anwụghị na egwuregwu a!
Developer: Ulo na oku
Nkọcha nke candies
Ọ bụrụ na egwuregwu ochie na ihe eserese pixelated bụ ihe gị, mgbe ahụ nke a bụ maka gị. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịgabiga agụụ maka otu ihe ahụ, Nkọcha nke Candies’n bụ otu n’ime aha ị ga - anụ ụtọ igwu egwu., n'ihi na ụwa ha na isiokwu ha na-eme ka ị cheta ọtụtụ egwuregwu ikpo okwu nke mgbakọ ochie.
Molli Pop bụ agwa ị ga - ejikwa n’ime egwuregwu ahụ. Mee ka ujo ya pụọ ​​otutu ndi mmadu na ndi mmuo n'ime ulo ojoo na ebe nzuzu ebe ogba aghara na ogba aghara na-achi, nke Ghost King na-ebibikwa.
Ka ị na-aga na Nkọcha nke Candies, ị nwere ike iwalite Molli Pop site na iji ọkụ ọhụụ ọhụrụ, nke dị mkpa iji mee ka ìhè dị na ụzọ wee merie mmụọ, na ikike ndị na-eme ka ọ nwekwuo ike ịme ihe na agile, nke dị mkpa iji merie ma zere ihe ndị e kere eke na-anwa imeri ya ka ọ ghara ogo. Na mgbakwunye, iji nweta ọrụ nke imeri Ghost King, ị nwere ike ịmekọrịta na ụmụ ghostly na ihe ndị ọzọ si n'ofe. Ọrụ gị bụ ime ka ụlọ obibi nke ndị ajọ mmadụ dị ọcha na-achọ shuga iji mejụọ akpịrị ịkpọ nkụ!
Agba Agba - Mgbaghoju anya puzzle na ntụpọ na shapes
Ọtụtụ oge anyị na-achọ egwuregwu iji nwee ọ andụ ma nọrọ na ya n'ụzọ ntụrụndụ, karịa ihe ọ bụla n'oge ichere na nkụda mmụọ, mana ọ bụ eziokwu na mgbe ụfọdụ naanị anyị chọrọ izu ike, na maka nke a enwere ọtụtụ egwuregwu na-enyere ebumnuche, nke a bụ mgbe anyị gafere ntụpọ agba - izu ike puzzle na ntụpọ na ọdịdị, egwuregwu iji zuru ike ma kpochapụ uche.
Aha Indie a nwere ọtụtụ ihe mgbagwoju anya na agba, nke dị mma ma dịkwa jụụ. Otú ọ dị, nke a apụtaghị na ha dị mfe idozi; Ka ị na-aga n’ihu, ihe na-esiri gị ike, na o nwere ike ị gaghị ezu ike. Nwalee ma melite mmeghachi omume gị ọsọ, mgbanwe, nkenke na anya anya na egwuregwu a dị egwu ma dị mfe na, na mgbakwunye, ọ bụ nnukwu ọkụ, yana ibu nke, site na obere, gafere 15 MB. Ihe dịkwa mma n’egwuregwu a bụ na ọ chọghị njikọ Internetntanetị, yabụ enwere ike ịkpọ ya n’oge ọ bụla na ebe ọ bụla, ma ọ bụrụ na ọ ga-emegharị gị anya ma ọ bụ nwee oge ọ aụ na-atọ ụtọ.
Developer: Ngwa UX
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Egwuregwu egwuregwu kacha mma kacha mma maka gam akporo